U-2021 unyaka onzima impela. Ithonya le-COVID-19 emazweni ahlukahlukene liyaqhubeka, futhi ukuthengiswa ezimbonini ezahlukahlukene kuyehla. Ethintwe ukwehla kwamandla emali emhlabeni jikelele, i-iron yensimbi eluhlaza inyuke ngaphezu kwama-40% ne-aluminium cishe ngama-50%. Ezinye izintengo zezinto ezisizayo, njengamabhokisi, amateyipu ...
Ngokuthuthukiswa kobuchwepheshe bezobuchwepheshe bokufakelwa kanye nezinguquko ezintsha embonini yezokuthengisa, izinkampani eziningi seziqalile ukuthuthukisa noma ukusebenzisa izinqola zokuthenga ezihlakaniphile. Yize inqola yokuthenga ehlakaniphile inezinzuzo eziningi zohlelo lokusebenza, futhi idinga ukunaka ubumfihlo nezinye izindaba. ...
Inqola yokuthenga enezinhloso eziningi, amandla amakhulu, angahlala futhi agoqeke, athandwe ngokujulile ngabathengi! Ngokuthuthuka kwezindinganiso zokuphila, izidingo zabantu zekhwalithi yempilo nazo ziya ngokuya ngokuya zikhula, okubuye kube kakhulu p ...
Ungalisebenzisa Kanjani Ibhasikidi Lokuthenga Nenqola Yokuthenga Ngokufanele
Ngenqubekela phambili yomphakathi, impilo yethu ilula ngokwengeziwe. Uma ufuna ukuthenga imifino, izithelo, okokuwasha nezinye izidingo zansuku zonke, ungaxazulula zonke izinkinga ngokuya esitolo ukuze wenze umbuthano. Kodwa uyazi? Isuphamakethe empeleni iwumthombo omkhulu kakhulu wegciwane ...